Akwụkwọ ntuziaka na -esi ísì ụtọ na -esi nri China na ndị na -eweta oge dị iche iche Trimill
Ọ bụrụhaala na ọ bụ obere irighiri ihe, ị nwere ike gwerie ya mgbe ọ bụla masịrị gị. Cumin, mkpụrụ chili, nnu oke osimiri Korea, ose ọhịa Taiwan na ihe ndị ọzọ. Ma etinyela mkpụrụ osisi sesame niile ka ha gwerie. Mkpụrụ osisi granular dị otú ahụ na -adị mfe ịgbakasị ma gwerie ma gbochie ọdụ ụgbọ mmiri na -agbapụta mmiri. Yabụ na ekwesịrị ịkewa ya ma jiri ya mee ihe.
Na mkpokọta, a na-eji acrylic dị mma mee karama ahụ nke nnu ose, a na-ejikwa ụfọdụ ihe dị ka achara carbonized. Blades bụ tumadi igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ seramiiki.
Zụrụ mkpụrụ osisi ojii ma ọ bụ nke ọcha, tinye ha na igwe ihe na -esi nri, tụgharịa aka ma ọ bụ okpu karama ka ị nweta ntụ ntụ ọhụrụ. Ọ dị mfe iji, a na -enwekarị karama ihe na -esi nri, nke enwere ike iji jide ntụ ntụ ala.
E nwere ọtụtụ ụdị ose, ose ojii, ose ọcha, ose na -acha akwụkwọ ndụ, na ose uhie.
A na -eme ose oji site na mkpụrụ osisi na -etobeghị eto na osisi vaịn ose. Buru ụzọ sie ya obere oge na mmiri ọkụ iji hichaa elu ma kpoo ya. N'oge usoro a, n'ihi ihe ero ahụ na -eme, peel nke kpuchiri mkpụrụ ahụ ga -eji nke nta nke nta gbaa ọchịchịrị wee daa, n'ikpeazụ, ọ ga -aghọ akwa dị gịrịgịrị. Mgbe usoro ihichachara, ngwaahịa enwetara bụ mkpụrụ ose oji.
A na -eme ose na -acha ọcha site na mkpụrụ osisi na -ewepụ peel. A na -ejikarị ose chara acha na -acha ọcha ọcha, gbanye ya mmiri ihe dị ka otu izu, tee ya iji wepụ ihe fọdụrụ na mkpụrụ osisi ahụ, wee kpọnwụọ mkpụrụ osisi ndị ahụ chara acha wee ghọọ ose na -acha ọcha.
A na-ejikarị ose ọcha dị ka ihe na-eme ka nri dị ụtọ na ihe oriri ndị ọzọ na United States na obodo ndị ọzọ, n'ihi na a na-amata ngwa ngwa ose oji na nri nwere agba dị ọkụ. Ọ bụ arụmụka ma ose oji ma ọ bụ ose ọcha na -aka njọ. Ebe ọ bụ na enweghị ike ịhụ ihe ụfọdụ dị na akpụkpọ ahụ dị n'elu, isi nke ose abụọ ahụ abụghị otu.
A na -eme ose ose, dị ka ose oji site na mkpụrụ osisi na -etobeghị eto. Obere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ a mịrị amị na-ejigide akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ya ruo ụfọdụ n'ihi na esichara ya dị ka sọlfọ dioxide ma ọ bụ ihicha nkụ. Mkpụrụ ose a kụrụ n'ime brine ma ọ bụ mmanya ga -apụtakwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Mkpụrụ ose ọhụrụ na nke a na -edozighị emezi dị ụkọ na West. A na -ahụkarị ha na ụfọdụ efere Eshia, ọkachasị nri Thai. Isi nke mkpụrụ osisi ose ọhụrụ dị oseose ma dị ọhụrụ, na -esi ísì ụtọ. Ose a na -esighị ike ma ọ bụ nke a pịrị apị ga -erekasị ngwa ngwa.
Ịcha mkpụrụ osisi na -acha uhie uhie chara acha na brine na mmanya nwere ike ime ose ose na -adịghị ahụkebe; A na -ejikwa teknụzụ ichekwa ụcha nke ose na -acha akwụkwọ ndụ kpọrọ nkụ wee kpọnwụọ mkpụrụ ose na -achaghị acha nke chara acha.
Nke gara aga: Nnukwu batrị eletriki nnu na ose igwe ESP-1
Osote: Mkpa Nnu na Nri ose
Ose grinder na nnu
Nnu na ose ose ihe